We She Me: ဘလော့ဂ်သားလေး (Micro-blogging)
khin oo may - 9/13/08, 12:53 AM
အခုလောလောဆယ် အခြေ အနေ မှာတော. ဘလော.ရဲ. Recent နဲ.လောက်ဘဲ လိုအပ် အသုံးငင် ပါသေးတယ်။ ဗဟုသုတ ကို မျှ တတဲ.အ တွက် တော. ကျေးဇူးပါ။
MyowinZaw - 9/13/08, 1:45 AM
Anonymous - 9/13/08, 2:55 AM
မှတ်သားသွားပါတယ် ဆရာ။ share တာ ကျေးဇူးပါ။
Nu Thwe - 9/13/08, 9:14 AM
ရခိုင်လို ခေါ်ရင် ဘလော့ဂ်ချေ (ဘလော့ဂ်ရှေ) ပေါ့လေ။
အီးအိုတီ လုပ်ကြည့်တာ မအောင်မြင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကိုမောင်လှနည်းရော၊ ကိုရန်အောင်နည်းရော စမ်းပြီးပြီ။ ကယ်ကြပါဦး။ ကျမက နည်းနည်း ဒုံးဝေးတယ်။ အလွယ်ဆုံး website (either in English or in Myanmar language) ကိုသာ ညွှန်းပေးပါ။ ကျေးဇူးပါ။
imaginary clouds no2- 9/13/08, 12:08 PM
အန်ဒီရေ လင့်လုပ်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲ ။ ဘလော့ အမျိုးအစားတွေအကြောင်းအခုမှသိရပါတယ် ။ ဆက်ရေးပါ စောင့်ဖတ်လျက်။
Andy Myint - 9/15/08, 4:57 PM
Blog ရှိထားရင် အတော် ဖူလုံနေပြီပဲ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား မခင်ဦးမေ
ကျွန်တော် EOT တကယ် မလုပ်ဖူးဘူး မနုသွဲ့
ရေ… ကျွန်တော့်ဆီမှာလည်း မလုပ်ထားပါဘူး။
အားပေးတာ ကျေးဇူး ဆရာတိန်
Nu Thwe - 9/15/08, 9:56 PM
ဒီမှာ အီးအိုတီ မလုပ်ထားတာ သတိထားမိပါတယ်။ ဆရာဆိုတော့ အားကိုးလို့ပါ။ အကောင်းပြောတာပါရှင့်း)
Andy Myint - 9/15/08, 10:22 PM
အစ်မရေ ဒီတစ်ခုတော့ တွေ့တယ်။ စမ်းကြည့်ပြီး အဆင်မပြေရင် ပြောလေ... http://dathana.blogspot.com/2006/04/weft-eot-font-tutorial.html
Nu Thwe - 9/15/08, 10:41 PM
ခုလောလောဆယ်တော့ “သော့တစ်ချောင်း”ကို အသည်းအသန် ရေးနေရလို့ အီးအိုတီ နောက်မှ လုပ်ဖြစ်ဖို့ သဘောရှိနေတယ်။ အောင်မြင်တာနဲ့ မုံ့လာကျွေးပါ့မယ်း)